Information in your language - မြန်မာ / Burmese - Services Australia
Information in your language - Burmese
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ကြေးပေးငွေများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အကြောင်း သင် ပိုမိုလေ့လာရန်အတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် သင့် ဘာသာစကားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာပြန်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို မရယူနိုင်လျှင် သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား သင်၏ ဘာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပြင်ပသို့သင် ခရီးထွက်မည်လား / Are you travelling outside Australia?
လိမျလုပျဇာတျမြားကို သတိထားပါ / Beware of scams
COVID-19 Disaster Payment အကွောငျး သတငျးအခကျြအလကျမြား / COVID-19 Disaster Payment
အေ􀇤ကးဆပျမ􀋪ွပနျစွခငျး။ / Centrelink debt repayments to start again (Transcript)
သငျ မညျသူဖွဈကွောငျး အတညျပွုပါ / Confirm your identity
မိသားစုနှငျ့အိမျတှငျး အကွမျးဖကျမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ စဈဆေးရမညျ့စာရငျး / Family and domestic violence checklist
မိသားစုနှင့် အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု။ တော်လောက်ပြီး ဟုပြောရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ။ / Family and domestic violence. It’s time to say enough.
ငငှငေ ကွေး အခကျြအလကျ ဝနျငောငျမှု / Financial Information Service
ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကူအညီ / Financial assistance for students
Financial Information Service က ကူညီနိုငျပုံ / How the Financial Information Service can help
COVID-19 ကာကှယျဆေးထိုးထားပွီးကွောငျး အထောကျအထား ရယူပါ / How to get proof of your COVID-19 vaccinations
မကကနြေပျခကျြေ တိုငျတနျးခခငျးမြေျေားနှငုံျ့ တိုံ့ခပနျသကောထျေားကပျးခခငျး / How to makeacomplaint or provide feedback
သငျ Centrelink သို့ ပေးရနျရှိသညျ့ငှကေို ပွနျဆပျပုံနညျးလမျး / How to repay money you owe Centrelink
အကယျ၍ သငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (COVID-19) ရောဂါကွောငျ့ ထိခိုကျခံရလြှငျ / If you are affected by coronavirus (COVID-19)
သင်၏ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း / Immunising your child
သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - Medicare Card နှင့် Health Care Card / New to Australia - Medicare Card and Health Care Card (Transcript)
သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - ထောက်ပံ့ပေးငွေများ / New to Australia - Payments (Transcript)
အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည်များ (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ယူရမည့်တာဝန် သတ်မှတ်ချက်များ) / Newly arrived refugees - mutual obligation requirements
လူမှုရေ်းလလုပ်ငပ်းပနှုပ့်ပေ်သက်သော ဝငပဆေ်ပမှုမမ် / Social work services
Temporary Protection Visa Subclass 785 (TPV)(ယာယီ အကာအကွယ်ပေးမှုဗီဇာ (TPV) အမးအစားခွဲ 785) နှင့်Safe Haven Enterprise Visa Subclass 790 (ဘေးကင်းလုံခြံရေး ခု လှုံရာဗီ ဇာ (SHEV) အမးအစားခွဲ 790) ကုင်ဆောင်သူမားအတွက် Special Benefit (အထူးအကးခံ စားခွင့ / Special Benefit for Temporary Protection Visa Subclass 785 and Safe Haven Enterprise Visa Subclass 790 holders
လူဝင်မှုအဆင့်အတန်း ဖြေရှင်းမှု ပံ့ပိုးရေး ၀န်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ငွေ / Status Resolution Support Services payment
Status Resolution Support Services (SRSS) ထောက်ပံ့ကြေးေ်းငွေ— သငံ့ဝင ငွေကို အစီရင ခပခြငး/ Status Resolution Support Services payment - Reporting your income
ဆုဵျ့ဖတးခ်ကးတစးခုကို သငး သဘောမတူပါက ဘာလုပးရမညးနည့း။ / What if you do not agree withadecision?
Paid Parental Leave အစီအစဉ် လုပ်ငန်းခွင် မှ မိဘ အသစ်များအတွက် လုပ်ငန်းရှင် များ၏ အချက်အလက်များ / Paid Parental Leave scheme for employers
This information was printed 20 October 2021 from https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-language/burmese. It may not include all of the relevant information on this topic. Please consider any relevant site notices at https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/site-notices when using this material.